Henry olonga News - Henry olonga Latest news on thatscricket.com
Olonga ready to renew sporting, cultural ties Henry Olonga, the first black cricketer to represent Zimbabwe national cricket team, has called for renewing sporting and cultural ties with his homeland ahead of a proposed match with the Scottish team.Olonga, who left the country seven years ago after ...
Flowering for England! Exotic plants need the right environment to bloom in. And in Andy Flower, English cricket may have found that special element, to give the country’s game a new perspective. Seemingly passive, Andy Flower gets his point across in the most subtle ...
Flower demands sporting sanctions against Zimbabwe
London:Former Zimbabwe captain Andy Flower has called for sporting sanctions against the regime of Robert Mugabe following the vicious beating of opposition leader Morgan Tsvangirai. ...
Zimbabwe crisis an internal matter: ICC
Lahore:The International Cricket Council (ICC) said it had no power to resolve Zimbabwe~~s cricketing crisis following the resignation of captain Tatenda Taibu. ...
New Zealand want Zimbabwe banned
New Zealand:The New Zealand government is leading a push to have Zimbabwe banned from international cricket after saying it would not welcome a team representing the troubled African nation. ...
Zimbabwe rebels to go on fund-raising tour
Sydney:The 15 rebel Zimbabwean cricketers are planning to undertake a "social tour" of England to raise money for their day to day living as well as to meet the legal costs of their battle against Zimbabwe Cricket Union (ZCU). ...
Weakened Zimbabwe reveals side for England tour
Harare: Without the services of four key players Zimbabwe revealed a weakened squad on Tuesday for its ten-week tour of England beginning on May 3. ...